ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ဘောလုံးဆိုတာ လုံးနေတော့လည်း”
ရိုးရိုးလေး စဉ်းစား ကြည့်ရင် တော့ အားကစားမှာ
မယှဉ်ပြိုင်ခင် ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာ အတိ အကျ
ပြောရ မှာ ခက်သားဗျာ။ အဲ ခန့်မှန်းလို့ တော့ရတာ
ပေါ့။ ဒါတောင် မှားသွား နိုင်တယ် လေ။
လွဲများနေ လားမသိဘူး နော်။
“ ကိုပေါရေးတဲ့ပို့ စ် ကြီးက လုံးနေတာကိုး”
Being round (Burmese Slang) hasabit of negative sense when we refer toaperson , who says or does things atawrong time inawrong place. We say like this person is so round, meaning, you can not predict what kind of awkward things this person would do. So, when it comes to soccer, we use this expression " the ball is round " when the better team is defeated or we just can't predict which team will win. Even though you aim well , the ball can be out of bound or the goal- keeper could catch it,instead of hitting the net.
Your puzzle provokes my thought, and this is my sheer assumption. One thing , I have to say is , I am not sure whether the above mentioned slang is widely used in Burma.
မသုံးဖူးဘူး ။ ဘောလုံးပွဲတွေလည်း စိတ်မ၀င်စားတတ်တာမို့ အခုမှ ကြားဖူးတာပါ :D
ကိုပေါ... ဒီပို့စ်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး။ ညီမပို့စ်မှာ ကိုပေါရေးသွားတဲ့ ကွန်မန့်ကို ပို့စ်တခုအနေနဲ့ တင်ပေးလို့ ပြောလို့ တင်လိုက်မယ်နော်။
ဘောလုံးက လုံးနေတော့ တခါတခါ ဦးတည်ရာရောက်ဖို့ခက်ပြီး သူလိမ့်ချင်ရာလိမ့်သွားတတ်တာကို ဆိုလိုချင်တာလို့ထင်တာပဲ…
လုံးနေတော့ မတည်ငြိမ်ဘူးလေ… ဒါကိုပဲ အားကစားနည်းပညာတွေနဲ့ဦးတည်ရာရောက်အောင် ကစားကြတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ… နောက် ဒီနေ့ ကမ္ဘာမှာ ပေါ်ပြူလာ အဖြစ်ဆုံး ဘောလုံးကစားနည်းဖြစ်လာတာပေ့ါ...( လျှောက်ရွှီးကြည့်တာ)… ဒါကြောင့်လဲ ဘောလုံးဆိုတာ လုံးနေတော့လဲ ဆိုတဲ့စကားက ခေတ်စားတာဖြစ်မယ်… သူက တခြားအားကစားထက် လူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးမိုလား… ဆိုလိုချင်တာက လောကကြီးမှာ မမြင်ရတဲ့ အကွေ့ အကောက် အခက်အခဲတွေကို ထင်ပါရဲ့… ဒါကလဲ ပြောရခက်သား… ဘောလုံးပွဲကောင်းနေတုန်း မီးပျက် မီးစက်ဖွင့်မလို့ လုပ်တော့ ဓာတ်ဆီက ကုန်… ကိုပေါရေ…့ ကမ္ဘာကြီးကိုက လုံးနေတော့လဲ… (ကြောက ယားဖုကုပ်ဖို့ကုပ်တံလေးပေးကြည့်တာပါ… ကုပ်တံက တိုနေလားတော့ မသိဘူး)
အဟား အဲလို ခဏခဏကြားဖူးပါတယ်။ ကျနော်လည်း အခု ကိုပေါလို စဉ်းစားမိပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောဖူးတယ်။ “ဘောလုံးသာလေးတောင့်ကြီးဆိုရင် အနိုင်အရှုံးမင်း ကြိုပြောနိုင်မှာကျနေတာပဲ ” ဆိုပြီး။ ကျနော်တို့စကားပြောကြတိုင်း ကိုယ့်စကားကို ပိုပြီးလေးနက်အောင် စကားအလင်္ကာဆင်ပြီး ပြောတတ်ကြတယ်မလား။ အဲလိုထင်တာပဲ။ ကိုတန်ခူးပြောတာ ဘ၀င်ကျစရာရှိပါတယ်။ စကားမစပ် “ မျောက်ပန်းလှန်တယ်” လို့မသုံးရဘူးလို့ အဘိုးအဘွားတွေပြောဖူးတယ်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က (အကြွေလား၊ ငွေဒင်္ဂါးလား) အဲဒီမှာ ဂျော့ဘုရင်ရှိတဲ့အခြမ်းကို မျောက် လို့ နံနှိမ်ပြီးခေါ်တာတဲ့။ အဲလိုပဲ လှေကားခြေနင်းတွေမှာ ပိုက်ဆံအကြွေစေ့လေးတွေ သံနဲ့ရိုက်ကပ်ထားတာလည်း အဲလိုသဘောမျိုးပဲတဲ့။ (အညာဘက်က တောရွာတွေမှာ အခုတိုင်တွေ့နိုင်သေးတယ်) နောက်လူတွေက ဘာမသိ၊ ညာမသိ လက်ရှိ (ဗိုလ်ချုပ်ပုံ) အကြွေစေ့တွေပါ လှေကားမှာလျှောက်ကပ်ကြပါလေရောတဲ့။ (ကိုပေါ က ခေါင်းပန်းလှန်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ quote ထဲမှာ မျောက်ပန်းလို့တွေ့မိလို့ပါ) မှားသွားရင် ဆောရီးဗျို့။ ခဏခဏ လာဖတ်တယ်။
ဆောရီး ကိုတန်ခူးဟုတ်ဘူး။ မတန်ခူးနော်။ သေချာမကြည့်ဘဲ ရေးလိုက်မိလို့ပါ။